N@y Diary: April 2017
To The Land of Oz - 1
အိပ်ချိန်ရောက်မှ နည်းနည်း လေရှည်လိုက်ဦးမယ် 😴 မဟုတ်ရင် ရေးဖြစ်မှာကို မဟုတ်တော့ဖူး။
ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးသွားဖြစ်တဲ့ ခရီးစဉ်က အရင် သွားဖူးတာတွေထက် ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး အမှတ်ရစရာတွေများတယ်။ ဘဝမှာ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံလေးတွေ, တစ်ယောက်တည်း သွားဖြစ်တဲ့ solo trip, အရှေ့တောင်အာရှကနေဘယ်မှ မသွားဖူးတဲ့တောသူဆိုတော့ SEA ထဲကမဟုတ်တဲ့ ပထမဆုံးရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံ, ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ကြာတဲ့ လေယာဉ်လဲ ခုမှစီးဖူးတာ (နာရီ ၂၀/၃၀ လောက်ကြာအောင်စီးရတဲ့နေရာမှာနေတဲ့လူတွေ မရယ်ကြနဲ့နော် 😜)။
ဒီခရီးသွားဖို့ စစိတ်ကူးပေါ်လာတာက မသွားခင် သုံးပတ်လောက်မှ. အဲဒီ မတိုင်ခင်က ဗီဇာလျှောက်ဖို့တောင် ဘာတွေလိုမယ် ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ မသိဖူး. ခရီးသွားဖို့ ဘယ်လိုစီစဉ်တယ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ နောက်မှရေးတော့မယ်။ ခုပြောချင်တာက ဘာလို့ ဒီခရီးသွားဖို့ ရွေးလိုက်တာလဲဆိုတာရယ် ခရီးသွားပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ share ချင်တာ။
Solo trip သွားချင်နေတာတော့ ကြာပြီ အခြေအနေ မပေးသေးတာနဲ့ မသွားဖြစ်တာ. အဓိကကတော့ အတွေ့အကြုံလိုချင်တာရယ် သူငယ်ချင်း/မိသားစုနဲ့ သွားရင် လူများစုလုပ်ချင်တာလုပ်ရတော့ ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ ကိုယ် လုပ်တဲ့အချိန်နည်းသွားလို့ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ့်အချိန်ဇယားနဲ့ကိုယ် သွားကြည့်ချင်တာ။ group နဲ့ သွားတာ မကောင်းဖူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဖူးနော် ဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားသွား ကောင်းတာနဲ့ ဆိုးတာတော့တွဲနေတာပဲ။
Australia ကိုရွေးဖြစ်တာက ကိုယ်သွားချင်တဲ့အချိန်မှာ ရာသီဥတုကောင်းနေတယ် လေယာဉ်လတ်မှတ်ကလဲ တစ်လအတွင်း ကပ်ပြီးဝယ်တာတောင် ဈေးမကြီးလှဖူး, English speaking country လဲဖြစ်တယ် backpackr တွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ environment လဲ ရှိတယ် အာရှနိုင်ငံ ဖြစ်ပေမယ့် တခြားအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရှိတယ်. Urban life ကို ခံစားလို့ရသလို သဘာဝအလှလေးတွေလဲပေါတယ်. နောက်ပြီး ဒီခရီးက နောက်သွားမယ့် လနဲ့ချီကြာမယ့် ခရီးစဉ်တွေအတွက် Trial trip ဆိုတော့ သိပ်လဲမဝေးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ တော်တော်လေးကိုက်နေလို့ရွေးဖြစ်သွားတာ။
မသွားခင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ excited ဖြစ်တယ် ဖြစ်ပါ့မလားလို့ သံသယ စိတ်နည်းနည်းရှိတယ်, ကြောက်လားဆိုတော့ ကြောက်တဲ့စိတ်တော့ သိပ်မရှိဖူး အစတည်းက safe ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကို ရွေးထားတာကိုး 😜
ပထမပုံက မသွားခင် သုံးရက်အလိုက ToDo list သိပ်မများပါဖူး. 😂 မသွားခင် တစ်ပတ်အလိုလောက်မှာ Women Traveler & Backpacker in Singapore group က meetup တစ်ခုသွားတော့ အဲဒီကကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူလဲ ဧပရယ်နောက်ဆုံးပတ် AU သွားမှာတဲ့ ကိုယ့်ကို itinerary ပြင်ပြီးပြီလားဆိုတော့ မပြင်ရသေးဖူး ဆိုတော့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ် 😂 အမှန်က ကိုယ်သွားချင်တဲ့မြို့တွေရယ် နေရာတွေရယ် စိတ်ထဲမှာရှိတယ် ရက်အတိအကျ နေရာအတိအကျသာ fixed plan လုပ်မထားတာ.
ဒုတိယပုံက ယူသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ၁၂ ရက်စာ ဟိုမှာ laundry လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိတော့ ၁၂ ရက်စာအဝတ်လောက်အောင်သယ်သွားရတယ် ဒီအထုတ်လေးတွေနဲ့ အပို ဖိနပ်နှစ်ရံပါ ကျောပိုးအိတ်ထဲ ကာအောင်ထည့်ရတယ်. Packing skill ကတော့တော်တော်တိုးတက်လာပြီ.
မသွားခင် မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတာက ကိုယ်သွားမယ့်နေရာတွေရဲ့ offline maps တွေ download လုပ်ရတယ် Booking confirmation, flight & train ticket တွေကို Cloud မှာလဲ upload လုပ် ဖုန်းထဲမှာလဲ offline available ဖြစ်အောင် လုပ်ထားရတယ်.
သွားပြီးပြန်လာတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် confidence ပိုရလာတယ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်သွားချင်တာကို ကိုယ့်ဘာသာကို စီစဉ်ပြီး အဆင်ပြေအောင် manage လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ တော်တော်လေး စိတ်ကျေနပ်သွားတယ် ☺️ အဆင်ပြေတာကတော့ပြေလွန်းလို့ခက်နေတယ် လမ်းတောင် နည်းနည်းလေးမှမမှားခဲ့ဖူး 😂 ကိုယ်က မြို့ထဲမှာ သွားနိုင်သမျှ လျှောက်နိုင်သမျှ လျှောက်ကြည့်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ တခါတလေ Google Maps ကပြောတဲ့လမ်းအတိုင်းမသွားဘဲ ပိုကြာမယ့်လမ်းကို ရွေးသွားလိုက်တယ် တစ်နေ့တစ်နေ့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်က ငါးနာရီကနေ ၇/၈ နာရီလောက် ရှိမယ်. Melbourne မှာဆို ဘာ transportation card မှမဝယ်ဘဲဂလမ်းလျှောက်လိုက် အလကားစီးလို့ရတဲ့ Tram လေးစီးလိုက်နဲ့ ငါးရက်နေလာတာ 😂
အဓိကပြောချင်တာက တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားတာ အန္တရာယ် ဒီလောက်မများပါဖူးလို့ ကိုယ်က ဉာဏ်လေးသုံးတတ်ဖို့နဲ့ သတိရှိဖို့ပဲလိုတာ. သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းသွားချင်ပြီး ဖြစ်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေ ရှိလို့ .
တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကမ္ဘာပတ်နေတယ်ဆိုတာ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ မထူးဆန်းလှဖူး ခုမှစပြီး ပွင့်လင်းခါစ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဲလိုသွားတဲ့လူ မရှိဖူး မဟုတ်ဖူး ရှိတော့ ရှိတယ် ဒါပေမယ့်ရှားတယ်.
(တော်သေးပြီ နောက်မှဆက်ရေးတော့မယ်. မနက် ရုံးကို ကိုးနာရီအရောက်သွားရဦးမယ် 😫 😴)
By Nay Chi Zaw at April 25, 2017 No comments: